रोनाल्ड रेगन - विकिपिडिया
अमेरिकाका ४० अाैँ राष्ट्रपति
रोनाल्ड विल्सन रेगन (/ फेब्रुअरी ६, १ ९ ११ - जुन ५, २००४) एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ र अभिनेता थिए जो १९८१ देखि १९८९ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिका को ४० औँ राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गर्थे। राष्ट्रपतिको सामु अघि, उनी एक हलिउड अभिनेता र सङ्घ थिए १९६७ देखि १९७५ सम्मको क्यालिफोर्नियाको ३३ वासिन्दाको रूपमा सेवा गर्नु अघि नेता।
रीगन उत्तरी इलिनोइसका साना शहरहरूमा गरिब परिवारमा उठाइयो। उनले १९३२ मा युरेका कलेजबाट स्नातक गरे र धेरै क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनहरूमा खेलकुद उद्घोषकको रूपमा काम गरे। १९३७ मा हलिवुडमा जाने पछि, उहाँ एक अभिनेता हुनुभयो र केहि प्रमुख प्रस्तुतीकरणमा अभिनय गर्नुभयो। रेगन दुई पल्ट स्क्रीनसेल अभिनेता गिल्ड-अभिनेताका लागि मजदुर यूनियनका अध्यक्ष चुनेका थिए - जहाँ उनी कम्युनिस्ट प्रभावको जरामा काम गर्न थाले। १९५० मा, तिनी टेलिभिजनमा गएर जनरल इलेक्ट्रिकफ्याक्टरीहरूमा प्रेरणात्मक स्पीकर थियो। १९६२ सम्म रेगन सधैं एक डेमोक्रेट भएको थियो, जब उनी एक रूढ़िवादी बने र रिपब्लिकन पार्टीमा बदलिए। १९६४ मा, रेगनको भाषण, "ए टाइमको छनौट", बैरी गोल्ड वाटरको संस्थापक राष्ट्रपतिको समर्थन गरी उनलाई राष्ट्रिय संरक्षणमा नयाँ रूढिवादी प्रवक्ताको रूपमा लिईयो।
समर्थकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्दै उनी १९६६ मा क्यालिफोर्नियाको गभर्नर चुनिएका थिए। गभर्नर रेगनले करार गरेपछि एक अधिशेषको लागि बजेट बजेट घाटा भयो, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनकारीहरूलाई चुनौती दिएका थिए, नेशनल गर्ड अफगानिस्तानमा विरोधको अवधिमा आदेश दिए। १९६८ र मा आन्दोलनहरू र १९७० मा पुनः निर्वाचित भएको थियो। उनी दुई पटक १९६८ र १९९५ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको लागि रिपब्लिकन नामांकनको लागि असफल भए। १९८० मा चार वर्षपछि उनले सजिलै उम्मेदवारी जितेका थिए र उनीहरूको सबैभन्दा बृद्द अमेरिकी राष्ट्रपति बने। त्यो समय, जब तिनले निरन्तर जिमी कार्टरलाई पराजित गरे।
१९८१ मा राष्ट्रपति पदमा प्रवेश गर्दा, रेगनले नयाँ राजनीतिक र आर्थिक पहलहरू बढाए। उनको आपूर्ति-पक्ष आर्थिक नीतिहरु, "ड्रेगन" रेगनोमिक्स ", आर्थिक वृद्धि, आर्थिक गिरावट, र सरकारी खर्चमा कमीको लागि कर दर कटौतीको पक्षमा। आफ्नो पहिलो शब्दमा उनी एक हत्या प्रयासबाट बच्न, युद्धमा दबाइ युद्ध गरे, र सार्वजनिक क्षेत्रका श्रममा लडे। उनको दुई सर्तहरूमा, अर्थव्यवस्था १२.५% ​​देखि ४.४% देखि मुद्रास्फीति को कमी देखी, र ३.४ को वास्तविक जीडीपी को औसत वार्षिक वृद्धि; जबकि रेगनले घरेलू विवेकाधीन खर्चमा कर कटौती गरे, कर कटौती र सैन्य खर्च बढेकोले सङ्घीय समितिकाहरूलाई समग्रमा बढाउन योगदान गरे, यहां सम्म कि मुद्रास्फीति को समायोजन पछि पनि। उनको पुन: चुनाव बोली को समयमा, रगान को धारणा मा अभियान चलायो कि यो "मार्निंग इन अमेरिका" को रूपमा, १९९६ मा अमेरिकी इतिहास मा सबै भन्दा ठूलो निर्वाचन कलेज को जीतसँग परिदृश्य को जीतयो। विदेशमन्त्रीले आफ्नो दोस्रो शताब्दीमा शासन गरे, शीत युद्धको अन्त्य, लीबियाको बम विस्फोट, र ईरान-कन्रारा सम्बन्ध सहित। सार्वजनिक रूपमा सोवियत संघलाई "बुद्ध साम्राज्य" भनिन्छ, र ब्रान्डेनबर्ग गेटको उनको प्रसिद्ध भाषणमा राष्ट्रपति रेगनले सोभियत महासचिव मिखाइल गोरबाचोभलाई "यस पर्खाललाई फाल्ने!" भनेर चुनौती दिए। उनले मिखाइल गोर्बाचोभसँग वार्ता गर्दा संलग्न हुँदा यूएसएसआरका साथ एरम्स दौड बढेर डटेन्टबाट ठंडै युद्ध नीतिलाई सारियो। यस वार्ताले आईएनएफ संधिमा परिणत गर्यो, जसले दुवै देशको परमाणु शस्त्रागारलाई शान्त गर्दछ। रगानले सोभियत युनियनको गिरावटको समयमा आफ्नो राष्ट्रपति सुरू गर्यो, र बर्लिन पर्खालले उनको कार्यकालको अन्त्य पछि दस महिनाको अन्त्य गर्यो। जर्मनीले अर्को वर्ष पुनः पुन: स्वीकृत गर्यो, र डिसेम्बर २६,१९९१ मा (उनीहरूलाई छोडेपछि तीन वर्षपछि) सोभियत संघले पराजित गर्यो।
१९८८ मा रेजन बायाँ अफिस गर्दा उनी ६० वर्षको अनुमोदनको मूल्याङ्कन गरे, फ्र्याङ्कलिन डी. रूजबेल्टले र पछि बिल क्लिंटनसँग मिल्दछन्, आधुनिक युगमा राष्ट्रपतिहरूलाई छुटाउनको लागि उच्चतम मूल्याङ्कन। ड्वाइट डी इइसेनवरले दुई पूर्ण सर्तहरूको सेवा गर्न पहिलो राष्ट्रपति भएको थियो, पछि पाँचवटा राष्ट्रपतिका उत्तराधिकारीहरूले गरेनन्। यद्यपि उनले एक सक्रिय पोस्ट-अफिसको योजना बनाइसकेका थिए, रेजन नोभेम्बर १९९४ मा खुलासा गरे कि त्यो वर्षमा पहिले अल्जाइमरको रोगसँग निदान गरिएको थियो।
त्यसपछि, उनको अनौपचारिक सार्वजनिक उपस्थिति अधिक अपरिवर्तनीय भयो किनकि यस रोगले प्रगति गर्यो। उनी ५ जुन, २००४ मा घरमै मर्नुभयो। रिपब्लिकनहरू बीचको प्रतिमा, अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासकार रेटिङ्गमा उनीहरूको अनुकूलता देखिन्छ, र उनको कार्यकालले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रूढिवादी नीतिहरूको पक्षमा एकताबद्ध बनायो।
विकिमिडिया कमन्समा रोनाल्ड रेगन सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=रोनाल्ड_रेगन&oldid=977776" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २६ डिसेम्बर २०२०, २०:३९
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २०:३९, २६ डिसेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।